Zvinotendwa chaizvo kuti kufamba ndechimwe chinhu chaunotenga kuti uve kana kupfuma! Uye hazvisi zvakafanira nguva dzese kuti iwe unofanirwa kusiyana nemari yako yawakawana zvakaoma kuti unakirwe nehupfumi. Paunenge uchironga kubuda kunze kwezuva-kwakatsvanywa zvitsuwa zvinopisa, kana echando-yakafukidzwa ski makomo, kana zvisakadaro renje rakasvibira, urikuita sarudzo zhinji nguva zhinji. Ita kuti kurota kwako kuzadzike nekusaita zvakafanana zvakaoma. Gara neboka rako uye uronge mukati mebhajeti rako. Ita rwendo rwese ruve rwakanaka. Kufamba kweboka inzira dzakanakisa dzekuve nekushamwaridzana kukuru. Asi hazvisi zvese zvinofamba zvakanaka muchikepe, kana isina kurongwa nekukwana. Zvinganzwika sezvisina musoro kuti uratidze mutengo wekufamba, asi mune zvakawanda zvakavanzika glitches mariri. Dzivisa zvese zvisina kunaka zvine chekuita nerwendo rweboka uye uronge zvine musoro. Verenga pazasi pematanho matanhatu ekushushikana-asina mazano ayo anonakidza ndiwo ekuronga bhajeti-rine hushamwari boka rerwendo.
Ehe! Ndizvozvo! Iwe unofanirwa kusarudza pane kwaunoda kuenda kutanga kuti uzive nezve sei pamisoro yezvizere. Asi dzimwe nguva zvinomira, sezvo vaviri vachiyanana. Uye idanho rakaomarara zvikuru zvakare. Kunyangwe iwe uri kuronga rwendo rwako runotevera neboka reshamwari, havasi vese vanogona kuzviwana zvakaenzana. saka, fanana nebhajeti shoma, vakasarudza pamwechete. Kuronga kwese kuchave kwakatsetseka, sezvo vazhinji vari muboka havazofaniri kunzwa vachimanikidzwa kushandisa mari yakawandisa. wo, Kuita sarudzo mukusarudza kwaunoda kuenda kunoshanduka, kunyanya neyakagadziriswa bhajeti mupfungwa. Naizvozvo, iwe, pamwe chete nedzimwe nhengo dzeboka, inogona kutora runhare kune iyo yekuwedzera mari sekufambisa nendege, rendi, chikafu, kubuda, uye zvakawanda. Kubatana kwakazara ndiko kunodiwa, uchironga rwendo rweboka, kuchengetedza kubatana.
Edza kufunga kuti ungamura sei mari yacho. Sarudza nezvenzira uye nzira dzekuparadzanisa mutengo wakakwana pakati pevamwe nhengo dzeboka. Semuyenzaniso, uchave iwe chete mutoro kune iyo yese hotera kadhi kubhuka, kana iwe unofanirwa kunge uchigovana zvakafanana muhafu? kana, unofarira here kutora mabasa sekukabatira kumabhawa uye kubuda kwezuva nezuva? Mune akawanda mapoka nzendo, kutora pamusoro peimwe chunk yebasa inowanzo kurumbidzwa. Iyo inoderedza zvinetso uye uye inobvisa mari yese inoenderana nekufamba.
Kana iwe wakaronga rwendo rukuru-rwakarongedzwa munguva pfupi, edza kumisa account yako wega. Iwe unofanirwa kuitawo saizvozvo mushe. Vese vanobatanidzwa nerwendo rweboka vanogona kuisa huwandu hwakati, pamwedzi, kuchengetedza kumusoro kunetseka-kwekupedzisira miniti. Icho chiitiko chakapusa chekubata mahotera akanaka, ndege-ndege, uye zvakanakisa zvekudya.
Ndichiri parutivi rwekuronga rwendo rweboka, ita zvishoma zvinoshanda nemari yako. Tarisa pane vatakuri vekutengesa. Kune akawanda ndege-anoshanda nendege, kubatisisa mashoma emapaketi ekufambisa. Ronga nhanho yako uchitevera kukurukura nezvakavanzwa nuances neboka rako mates. Semuyenzaniso, iwe unogona kudzora chirongwa chako chekufamba kuenda kuRoma, Athens, uye Istanbul kuburikidza neMalta. Kana kuti, kutanga rwendo rwako rweboka kubva Berlin kuPrague, Budapest naRiga vanomira sarudzo huru! Uye zvakadii nezverwendo rwemugwagwa kana kusangana nemisasa yevhiki-refu musango uine vamwe vako veboka? Nguva zhinji, mamiriro ekunze anoita seanotadzisa. Pasinei nemafashama emvura, zuva rinopisa, kana mhepo inovhuvhuta, kufamba nemotokari uchibatsirwa ne denga rack awning, chikomborero! Iyo inokatyamara kuti izere nekufukidzwa uye kutetepa kweiyo yakaradzika-mune machira ichigadzira iyo yakazara ruzivo pakufamba inozorodza.
Rwendo rweboka rinowanzobudirira pane pasina kukakavara kana nharo zvine chekuita nezvekudya, kunyanya. Ehe! Mafambiro mazhinji eboka anobereka 'kuzvidza kana mubvunzo ukamuka nechido chekudya chenhengo yega yega. Mumamiriro ezvinhu akadaro, kufunga zvakanaka uye kudya zvine hutano kunofanirwa kunge kuri mbichana yako. Kutsemura muresitorendi cheki kunovimbisa matambudziko uye nyonganiso pakati pevakaroora veboka. Semuyenzaniso, muchikwata chegumi, munhu asina kuroora anobhadhara mari yese ye bhodhoro rewaini, uye gare gare vamwe vanhu vari muboka vanobhadhara munguva, nyonganiso yakakosha ichaitika. saka, tenda pakupatsanura cheki nguva dzose. Kana kuti, unogona kuzviita kuburikidza ne 'shamwari-vaviri.' Bata chikamu chako nemumwe munhu ari muboka uende kumberi kubhadhara bhiri.
Iwe unogadzira boka mune izvi zvinoshandiswa, uko nhengo dzeboka dzinogona kupinda nekukurumidza uye dzinogona kupatsanura mutengo wese muzvikamu. Nyevero dzinotumira zviyeuchidzo zvine hushamwari kune vakasiyana vanhu vane hanya nekubvisa bhiri. Paunenge uchironga kuyananisa mari yeboka mari, dzivirira kuchengetedza. Rangarira izvi kuti uve nerunyararo famba mberi.
Kamwe iwe unonakidzwa nerwendo rwako rweboka uye nyika uchifara kumba, inguva yekubhadhara zvikwereti zvako zvekare (kana paine)! Zviri nani kugadzirisa chero zvikwereti zvekare, panguva yakatarwa yawatenderana. zvimwe, inomira sehomwe! Vazhinji vanofarira kubhadhara kuburikidza dzakasiyana-siyana pamhepo zvekushandisa, sezvazvinonzwika kunge svinu. Uye vamwe vane pfungwa dzakapusa vanofarira kubhadhara ivo pachavo, mumari. Ita shuwa kuti iwe unobhadhara mukati mevhiki kana zvakadaro. Kana kuti, uri kuzopererwa nekukoka rwendo rweboka rinotevera.
Hakuna, asi kutenda kwakashata pakati pevakawanda kwekufamba-famba pasirese hakugone kuitika pasina kiredhiti kadhi rechikwereti kana kubuda kwemari. Kana kana mumwe munhu anotsigira rwendo rwese! Asi zviri nani kuti usatende mazviri. Ichokwadi kuti hapana kwekufamba kunoitika pasina kubhadharisa mari. Iwo marongero ataurwa pamusoro apa zvechokwadi achakuchengeta iwe neboka rako rekuenda kure pamwe chete kune nzendo zhinji dziri kuuya. Iva akajeka-musoro pamisarudzo yako, uye shandira pamwe nevamwe vako vaunofamba navo, ipapo rwendo rweboka richava risingapfuure pakurota!
Unoda embed yedu Blog romukova “6 Savvy Matipi Kuronga A Boka Rwendo Pane Budget” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fgroup-trip-on-budget%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)